Toerana fiarahana miasa
Pejy fandraisana Momba anay Hetsika Fiarahana miasa Toerana Fifandraisana Vaovao FAQ Teny & Fepetra
Telefaona: 034 05 320 50
Inona ny fampiantranona orinasa?
Ny orinasa rehetra dia mila adiresy avokoa. Adiresy izay takian'ny fanjakana, ny hivon-ketra sy ny sehatra ara-barotra. Io adiresy io no ampiasaina amin'ny taratasy rehetra ary mampafantatra ny foibe misy ny orinasanao.
Ny Workshop Idea Center dia mampiatrano ny orinasanao, koa manome adiresy manamarina ny fisian’ny orinasanao eo anatrehan’ny lalàna mifehy ny orinasa. Atao izany mba afahanao mifantoka sy mampiroborobo ny asanao.
Marihina nefa fa tsy voatery ao amin’ny toerana misy ny adiresy ny orinasa no manatanteraka ny asany fa fanamarinana ihany izy io.
Ny tolotra mifanandrify amin'ny fahafahanao :
Na orinasa madinika na orinasa vaventy, na ihany koa mpandraharaha matianina na vao manomboka. Misy ireo tolotra natao ho antsika, manasa antsika ary hisafidy mba afahana mampiantrano ny orinasa ny tsirairay eo anivon’ny toeram-pandraharan’ny Workshop Idea Center, Ankorondrano na Manjaka Ilafy.
Fandraisana antso an-tarobia
Fanofana tsy maharitra
< 3 volana
Fikirakirana ny taratasy tonga
Fandraisana ny antso tonga
Fandefasana ny taratasy tonga mankany aminao
Petra-bola : 0
3 - 6 volana
Petra-bola : 250.000 Ar
Petra-bola : 200.000 Ar
Mila fanazavana fanampiny ve ianao ?
Antsoy izahay ! Faly izahay hamaly anao !
Teny & Fepetra